I-DXF: into ekufuneka uyazi malunga nale fomathi yefayile | Izixhobo zasimahla
I-DXF: into ekufuneka uyazi malunga nale fomathi yefayile
UIsake | | ngokubanzi, Ukushicilelwa kwe-3D
Kusenokwenzeka ukuba uze kule nqaku kuba uyayazi indlela ye- iifayile kwifomathi ye-DXF kwaye kufuneka wazi okuthile ngakumbi ngabo, okanye ngokulula ngenxa yokuba ungabazi. Kuzo zombini iimeko, ndiza kuzama ukukubonisa yonke into oyifunayo malunga nale fomathi ibaluleke kakhulu kwicandelo loyilo.
Ukongeza, kuya kufuneka uyazi ukuba zininzi isoftware ehambelanayo ngale fomathi, kwaye ayisiyiyo i-AutoCAD kuphela enokugcina uyilo okanye ivule kwi-DXF. Ngapha koko, amathuba maninzi kakhulu ...
1 Yintoni i-DXF?
2 Isoftware ehambelanayo
3 Ukushicilelwa kwe-3D kunye ne-DXF
4 I-DXF yokuprinta i-3D kunye ne-CNC
I-DXF sisifinyezo kwisiNgesi Ifomathi yokuTshintshiselana ngeDarwing. Ifomathi yefayile enolwandiso lwe-.dxf esetyenzisiweyo kwimizobo encediswa yikhompyuter okanye uyilo, Oko kukuthi, kwi-CAD.
Autodesk, umnini kunye nomvelisi wesoftware eyaziwayo ye-AutoCAD, nguye owenze le fomathi, ngakumbi ukwenza ukusebenzisana phakathi kweefayile ze-DWG ezisetyenziswe sisoftware kunye nezinye iinkqubo ezifanayo kwintengiso.
Vuka okokuqala kwi1982, Kunye nohlobo lokuqala lwe-AutoCAD. Kwaye kukuhamba kwexesha ii-DWGs ziye zintsonkotha ngakumbi, kwaye ukubakho kwayo nge-DXF kube nzima. Ayisiyo yonke imisebenzi ehambelana ne-DWG ehanjiswe kwi-DXF kwaye oku kukhokelela kwimicimbi yokuhambelana kunye nokungahambelani kakuhle.
Ukongeza kuloo nto, i-DXF yenziwa njengoluhlobo lwefayile yokutshintsha iifayile ukuba ibe ifomathi yendalo iphela. Ngale ndlela, iimodeli ze-CAD (okanye imodeli ye-3D) inokugcinwa kwaye isetyenziswe yenye isoftware okanye ngokuchaseneyo. Oko kukuthi, wonke umntu unokungenisa okanye ukuthumela ngaphandle kule fom ngokulula.
I-DXF inoyilo olufana nendawo yogcino lwedatha, ukugcina ulwazi kwi isicatshulwa esicacileyo okanye iibinaries yokuchaza ubeko nayo yonke into efunekayo ukwakha le kwakhona.
Kukho okungapheliyo izicelo zesoftware ezinokukwazi ukuphatha ezi fayile kwifomathi ye-DXF, ezinye zinokuvula kuphela kwaye zibonise uyilo, ezinye zinokungenisa ngaphakathi / ukuthumela kwelinye ilizwe kunye nokuguqula uyilo.
Entre uluhlu lwesoftware eyaziwayo enokuthi ihambelane ne-DXF inokuqaqambisa:
IBlender (usebenzisa iskripthi sokungenisa)
IMicrosoft Office (iLizwi, iVisio)
Ivenkile yepeyinti Pro
Ngoku ka iqonga usebenza nawe ungasebenzisa enye okanye ezinye usetyenziso. Umzekelo:
Android-Ungasebenzisa i-AutoCAD ekwafumaneka kwizixhobo eziphathwayo kwaye yamkela i-DXF.
Windows-Ungasebenzisa kwakhona i-AutoCAD kunye noPhononongo loYilo phakathi kwabanye, njengeTurboCAD, iCorelCAD, iCorelDraw, i-ABViewer, iCanvas X, iAdobe Illustrator, njl.
MacZininzi iinkqubo ezaziwayo zoyilo, enye yazo yi-AutoCAD, kodwa unayo i-SolidWORKS, i-DraftSight, njl.
Linux: enye yezona zaziwa kakhulu kwaye zisetyenziswa kakhulu yiLibreCAD, kodwa ungasebenzisa iDraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, njl.
Isiphequluliukuvula i-DXF kwi-Intanethi, ngaphandle kwesidingo seenkqubo, ungazenza nakwibrawuza oyithandayo ukusuka Yabelana okanye kwakhona IProfiCAD.
Kwaye, ewe, zikhona izixhobo ze-Intanethi kunye nezasekhaya ukuguqula phakathi kweefomathi zeefayile ezahlukeneyo, kubandakanya iDXF. Ke ngoko, unokuguqula uye kwezinye iifom ngaphandle kwengxaki. Nangona ndingaqinisekisi ukuba uyilo luya kufana okanye into engeyiyo ...
Ukushicilelwa kwe-3D kunye ne-DXF
Ukuba usebenzisa i- 3D iphrinta Kuya kufuneka uyazi ukuba ikwakhona isoftware ye Guqula phakathi kweefomathi ezahlukeneyo inika umdla kakhulu. Yimeko yezi ndlela zimbini:
UMeshlab: Isoftware ephathekayo, evulekileyo esetyenziswa ngokubanzi ekusebenzeni nasekuhleleni i-3D meshes. Unako ukuvelisa izinto ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje nge-OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D kwaye, ewe, yi-DXF. Iyafumaneka kwiLinux (kuzo zombini iipakeji ze-Snap nakwi-AppImage yayo nayiphi na i-distro), iMacOS kunye neWindows.
MeshMixer: Iyafana neyangaphambili, enye indlela. Kule meko ikwa simahla kwaye iyafumaneka kwi-macOS kunye neWindows.
I-DXF yokuprinta i-3D kunye ne-CNC
Ngokwanda kwe- 3D oomatshini bokushicilela kunye ne-CNC Kwishishini, iifayile ze-DXF zibaluleke kakhulu. Kuya kufuneka uyazi ukuba kukho ezinye iiwebhusayithi ezikuvumela ukuba ukhuphele iifayile ze-DXF yoyilo olwenziweyo ukulungiselela ukwakhiwa kwezinto. Ngale ndlela, awuzukuzenzela ngokwakho, eziluncedo kakhulu, ngakumbi ukuba awazi ukuphatha isoftware yeCAD.
Kukho ezinye iiwebhusayithi ezihlawulwayo, oko kukuthi, kuya kufuneka uhlawule umrhumo ukuze ukwazi ukufikelela kuyilo kwaye uzikhuphele ngokukhululekileyo. Abanye banjalo mahala, kwaye ungafumana isuntswana layo yonke into. Ukusuka kwiilogo ezilula ukuze uzenze kwi-DXF ekhutshelwe ngomatshini wakho, kwizinto, imihombiso, ifanitshala, iipleyiti, njl.
Umzekelo, ukuba ufuna ukuqala ukuvavanya i-DXF kuyo nayiphi na inkqubo yesoftware edweliswe ngasentla, ndincoma ukuba usebenzise enye yezi iiwebhusayithi zasimahla:
Uyilo lwe-DXF CNC
Iifayile zeCCN DXF
Así uya kuqhelana nefomathi Ngolu luyilo, okanye uvavanye umatshini owuthengileyo ukuze ubone ukuba uyawenza ngokuchanekileyo umsebenzi ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Ukushicilelwa kwe-3D » I-DXF: into ekufuneka uyazi malunga nale fomathi yefayile
Cwangcisa isikrufu: yintoni kunye nokusetyenziswa kwayo